नेपाल आज | होस् गर्नुहोस्, सडकमा पार्किङ गरिएको तपाईको बाइक गायव होला (भिडियो सहित)
होस् गर्नुहोस्, सडकमा पार्किङ गरिएको तपाईको बाइक गायव होला (भिडियो सहित)
बिहिबार, १३ जेठ २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौंको पूरानोबसपार्कदेखि शंकरदेबसम्मको क्षेत्रलाई खसी बजार भनिन्छ । यो क्षेत्रको बाटो अत्यन्त व्यस्त रहन्छ । तरकारी बजार, हस्पिटल, क्याम्पस, होटल, विभिन्न कार्यालय आदिइत्यादिका कारण यहांको ट्राफिक चांप अध्याधिक छ । तर, सो क्षेत्रमा पार्किङ गर्ने ठाऊं छैन । अलिक पर गएर पार्किङ गर्ने धेरैको बानी छैन । सजिलो उपाय हो सडक । सडकमै बाइक पार्किङ गरेर धेरैजसो लाखापाखा लाग्छन् ।
फर्केर आउंदा बाइक गायब भइसकेको हुन्छ । महानगरीय प्रहरीले ट्रिपरमा हालेर बाइक लगिसकेको हुन्छ, सवारीधनीलाई अत्तोपत्तो हुंदैन । खसीबजारमा मात्र होइन, काठमाडौंका अधिकांश सडकमा महानगरीय प्रहरी र सवारीधनीको लुकामारी दिनहुं भइरहन्छ ।
बाइक लैजादै गरेको दृश्य यहां हेर्नुहोस्
सडकमा राखिएका बाइक उठाउन ट्राफिक प्रहरी र महानगरिय प्रहरीकाबीचमा समन्वय हुन्छ । ट्राफिक प्रहरीले नो पार्किङ एरिया निर्धारण गरेको हुन्छ । पार्किङ गर्न नपाइने क्षेत्रका बारेमा ट्राफिकले महानगरीय प्रहरीलाई जानकारी दिन्छ । सोही आधारमा महानगरीय प्रहरीले ट्रिपर लिएर गस्ति गरिरहेको हुन्छ । देख्नासाथ सडकमा पार्किङ गरिएका गाडी उठाएर लैजान्छ । बाइकधनीलाई बाइक उठाएको जानकारि समेत हुंदैन । फर्केर आउंदा बाइक चोरी भएको ठानेर धनीलाई टेन्सन हुन्छ । सोधिखोजी गरेपछि प्रहरीले लगेको थाहा हुन्छ । त्यसपछि आइलाग्ने झन्झट छंदै छ ।
कहां लगिन्छ बाइक ?
ट्रक नभरिन्जेल ट्रिपर गस्तिमै हुन्छ । ट्रिपर भरिएपछि महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको प्राङगणमा लगेर राखिन्छ । सडकबाट उठाइएका ठेलागाडी, फलफुल, कपडाजस्ता सामाग्री भने महानगरीय प्रहरी प्रभाग टेकुमा भण्डारण गरिन्छ ।
फिर्ता कसरी पाउने मोटरसाईकल फिर्ता लगेकै दिन पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाईकलको कागजात दुरुस्त छ भनी रुजु गरेको कागज आवश्यक पर्दछ । कागज भएरमात्र पुग्दैन । १ हजार जरिवाना तिराएर बाईक फिर्ता दिईन्छ । फुटपाथ व्याबसायिकको हकमा कुरा गर्दा प्रहरीले सामान रिसिभ गर्दा संख्या खुलाएर भरपाई दिन्छ । सामान फिर्ता दिने बेलामा सो सामानको बजार मुल्य भन्दा केही कममा फिर्ता दिईन्छ ।
जरिवानाभन्दा बाइमा हुंने क्षति बढी
एक हजार तिरेपछि बाइक फिर्ता हुन्छ भन्दै ढुक्क नहुनुहोस् । कति जतनले चलाएको बाइक प्रहरीको निर्दयी हातमा पुग्छ । ट्रिपरमा राख्दा, लैजादादेखि झार्दासम्म बाइक कति ठाऊंमा कोतरिइसकेको हुन्छ । ऐना फुट्ने, लाइट फुट्ने, ब्रेक भांचिनेजस्ता समस्या धेरै बाइकमा देखिन्छ ।
कति उठ्रयो राजश्व ? २०७१ सालमा सरदर ११३० मोटरसाईकललाई कारबाही गर्दा १ करोड १३ लाख बराबरको राजश्व दाखिला भयो । त्यसै गरी २०७२ सालको भुकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा कम मोटरसाइकल कारबाहीमा परे । ९८० मोटरसाईकल कारबाहीमा पर्दा ९८ लाख बराबरको राजश्व संकलन भयो । यो बर्षको जेठसम्ममा १३ लाख बराबरको राजश्व संकलन भईसकेको छ । ५ हजार फुटपाथ ब्यबसायीलाई कारबाही गर्दा २०७२ सालमा ३५ लाख बराबरको राजश्व संकलन भयो । त्यसैगरी यो बर्षको जेठ सम्ममा थारै मात्रामा राजश्व संकलन भएको महानगरीय प्रहरीका डिएसपी धनपती सापकोटाले बताए ।
कारबाही प्रभाबकारी भएन
महानगरीय प्रहरीले दिनहु जसो कारबाही गरेतापनि सडकमा पार्किङ गर्ने र पसल थाप्ने क्रम रोकिएको छैन । नो पार्किङमा मोटरसाईकल पार्क भईरहेको हुन्छ । फुटपाथमा निष्फिक्रीसंग व्यापार चलिरहेको छ । महानगरीय प्रहरीका डिएसपी धनपति सापकोटा यो क्रममा कमि नआउनुमा कानुन दोषी भएको बताउछन । उनी भन्छन्, ‘नत शुन्य गर्ने कानुन बनेको छ, न त जरिवाना नै धेरै छ, सामान ल्याएपछि जफत नै गर्ने कानुन भएमा मात्र यस्तो क्रम शुन्यमा झर्छ । कि त जरिवाना अझै धेरै बनाउनु पर्यो ।’ महानगरीय प्रहरीसंग प्रयाप्त जनशक्तिपनि छैन ।
सबै बाइक उठाउन सक्ने क्षमतापनि छैन । अनुगमनका लागि हिड्ने जनशक्तिको अभाव खट्किएको छ । सापकोटा भन्छन्, ‘लगभग ५० ।६० जनाले पूरा काठमाण्डौ भ्याउनु पर्छ, नत यातायातको गतिलो ब्यबस्था छ न त सञ्चार नै, धन्न अभाबको बिच यति गरेका छौँ । तर यो क्रमलाई कमी गर्न मान्छेहरुले नै नियम पालना गर्नु प¥यो ।’
तीनै तहका सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छः मुख्यमन्त्री राउत [अन्तर्वार्ता]